The Best Space Selfies [RANKER] - Izindaba Rule
The Best Space Selfies [RANKER]
Njengoba kusobala namuhla, wonke umuntu uthathé selfie – ngisho nogogo wakho. Futhi njengoba cool njengoba wedwa nogogo wakho kungenzeka ukuthi, ngeke beka kuze kube wedwa isikhala taken by zezinkanyezi ikakhulukazi hhayi Mars Rover wedwa.
wedwa Astronaut Unesibindi ikakhulukazi ngoba nje kuphela ibonise nobubanzi ukuhlola womuntu, futhi zibonisa ukuthi kungakhathaliseki ukuthi singakanani i egghead wena, wonke umuntu uyakuthanda selifes ukuthatha. Ngisho more kuze kube yileso sikhathi, wedwa Mars Rover sika bayizibonelo lobuhle mechanical wobuciko.
Kungakhathaliseki noma cha ungumuntu othile ogama heartstrings kuthiwa wadonsa noma nini ubukela amabhayisikobho like Wall-E, ebona i rover wedwa ezimbalwa kuyokwenza ukholwa ukuthi John F. Kennedy kwaba on kokuthile lapho enquma kufanele siye enyangeni.
Funda Article Full
← A Way Cooler Sokuhlaziya Brain Ukuhlinzwa Iziguli Raspberry Pi 3: Card obujwayelekile Credit PC 1.2GHz ukuthi Izindleko $35 →